स्मृतिमा राम धामीः स्वर्गमा संगीतालय खोल्ने संगीतकर्मी...!
“मरेपछि स्वर्ग या नर्क कहाँ पुगिन्छ थाहा छैन । तर, जहाँ पुगे पनि त्यहाँ सङ्गीत नै सिक्न–सिकाउन पाए हुन्थ्यो । म त स्वर्गमा पनि सङ्गीत स्कुल नै खोल्छु होला यार !“
खित्का छोडेर एक हलको मेलो गलल...हाँस्दै, अक्सर राम धामी यसै भन्ने गर्दथे ।
मेरो नेपाल बसाइको ठुलो हिस्सा राम धामीसँगै बित्ने गर्दथ्यो । नयाँ वर्ष होस् या होली छेक पारेर भेटिल्याएका चाडपर्वहरुमा रम्न,रमाउन हामी एकसाथ हुन्थ्यौं । कहिलेकाहीँ त बिहानदेखि बेलुकासम्मै छुट्दैनथ्यौं हामी । उमेरले मभन्दा जेठा थिए, तर साथी जस्ता । संगीतलाई नै खानु,लाउनु र ओढ्नु,ओछ्याउनु बनाएका एक अथक साधक । हाम्रा थुप्रै अन्तरङ्ग सहयात्राहरु छन् । तर केन्द्रमा हुन्थ्यो कला,साहित्य र संगीत नै । राम धामी सङ्गीतका गुरु,साधक,अध्येता र उपासक थिए । पूर्वी नेपालदेखि काठमाडौँसम्म सिर्जनात्मक यात्रमा हाम्रो युगल टिम मज्जाले जम्दथ्यो । साहित्यको काम मेरो भागमा, सङ्गीतको काम उनको भागमा पर्दथे । अर्म–पर्म चल्थ्यो । दोहोरो सघाउँथ्यौं हामी । धनकुटामा भेटिएका राम धामी इटहरीमा थप चिनिए । त्यहीँ झाँगिएको हाम्रो सम्बन्धले अझै उचाइ नाप्न बाँकी नै थियो । तर, उनको भौतिक शरीरले त्यो अनुमति दिएन । उनी अस्ताए डाँडामाथीको घामझैं । तर छोडेर गए कहिल्यै नओझेलिने सम्झनाको न्यानोपन ।
नाट्य सम्राट स्व. बालकृष्ण समले यसो भनेथे– “ जसले गाउँदछ ऊ परमात्माको नजिक पुग्दछ र उसले परमात्मालाई चिन्दछ; गीत एउटा स्वरको डोरी हो, जसले गाउने र सुन्ने आत्मालाई एकै ठाउँमा गाँठो पारेर अल्झाइदिन्छ ।” वास्तवमा राम धामी संगीत शास्त्रका ज्ञाता थिए । गाउने र संगीत भर्ने दुवै कलामा पारङ्गत । अझ शब्द रचनामा पनि आफूलाई अब्बल सावित गरिसकेका । गीतकारसँग उनको सम्बन्ध सँधै सुमधुर रहन्थ्यो । गीतका गेडा छाम्न खप्पिस राम शब्द–शब्द केलाएर मात्र संगीत र स्वर प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने अहम मान्यताका मालिक थिए । उनी र यो पंक्तिकारबीचको अनन्य आत्मीयता र मधुर मित्रता पनि सिर्जनाका सवालमा हाम्रो समानान्तर मान्यता नै हो । सर्जक, दर्शक, श्रोता, पारखी, अनुरागी, शिष्य, शुभचिन्तक सबैलाई संगीतको सरगममा एकसुत्र पारी झमझम झुमाउने रसिक तागत थियो राम धामीमा । “मानिसको आत्मामा संगीतको प्रभाव काफी पाइन्छ, त्यसको लागि संगीतको लय वा ताल साधारण हुनुपर्दछ ।” संगीतसम्बन्धी प्लेटोको कथनले राम धामीलाई पनि छुन्थ्यो । राम धामीको जीवनशैली जति साधारण थियो, उनका संगीत सिर्जना पनि त्यत्तिकै साधारण लाग्दथे । तर साधारणभित्रको उत्कृष्ठताले राम धामीलाई सादा जीवन उच्च विचार भएको श्रष्टाको रुपमा मृत्युपर्यन्त न्याय गरिरहे ।
“मान्छे आखिर मान्छेजस्तो हुन किन सकेन
मान्छेले नै मान्छेको मन छुन किन सकेन ।”
मेरो गीत,गजल संचयनको डायरी लगेर लगभग महिनादिन आफुसँगै राखेपछि दशवटा गीत छानेर डायरी फिर्ता गर्दै भनेथे– “सुरुमा यो मानवतावादी गीतलाई संगीत गर्छु, यसको भाव र शब्दले मुटुसम्मै छोयो । ” नभन्दै पछि संगीत भरेर त्यसको डमी पठाइदिए मलाई राम दाईले । शिशिर योगी, नरेन्द्र प्यासी वा स्वरूपराज आचार्यमध्ये एकलाई गाउन दिने हाम्रो सल्लाह भयो । त्यही समयको सेरोफेरोमा राम धामी एकल साँझ भयो काठमाडौँमा । नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा प्राज्ञसभा सदस्य पनि थिए राम धामी त्यतिबेला । एकल साँझमा आफ्ना र अरुका गरेर दर्जनजति गीत गाए । ठुलो प्रसंसा र ताली पाए । एक साँझ फेशबुक मेसेन्जरमा सिधै भिडियो कल गरे । र, आफ्नो एकल साँझ अनि उक्त हाम्रो गीतको बेलिबिस्तार लाउँदै भने– “ए बाबै, अब यो गीत मै गाउँछु ल !“ उनी मलाई कहिलेकाहीँ बाबै भनेर बोलाउँथे । म पनि बुढा... शब्दले जिस्किने गर्थें बेलाबखत । खासगरी दाजुभाइकै सम्बन्ध र सम्बोधनमा रमेका थियौँ हामी । यो हाम्रो आपसी सद्भाव,भाइचारा र प्रेमको प्रतिविम्ब थियो ।
सुरुमा मैले शिशिर योगीको लागि फिट गीत कसरी तपाईं गाउने भनेर आनाकानी गरें । तर राम दाईले “म प्राज्ञ भएकै बेला यो एउटा गीत गाउन रहर लाग्यो, यत्ति पनि मेरो कुरा नमान्ने त ?“ भन्दा मुटु चरक्क भयो । अन्ततः म हारें, राम दाइले जिते । गीत उनैले गाउने भए, गाए, रेकर्ड पनि भयो । सरलताभित्र सुमधुरता, सुगमता र भव्यता राम धामीको सिर्जनामा पाइने विशेषतामध्ये यो गीत पनि पछिल्लो दसी हो भन्ने लाग्छ मलाई । त्यसो र, कवि तथा पत्रकार सुविद गुरागाईं यो गीतको म्युजिक भिडियो गर्नका निम्ति हामीलाई हौसाइरहन्थे । अझै पनि उनको झकझकाइ निरन्तर छ । सुरुमा पत्रकार प्रेम बास्तोलासँग यो गीतको भिज्युअल गर्नेसम्बन्धी कुरा पनि चलेको थियो ।
तत्कालको लागि सेलायो त्यो प्रसंग । कहिले लालबाबु पण्डित, कहिले विप्लव प्रतिक र कहिले बद्री अधिकारीहरुलाई यो गीत सुनाउदै भिडियो निर्माण कार्यमा सहकार्य गर्न अनुरोध गरेको र उनीहरुबाट आश्वासनसमेत पाएको उत्साह सुनाउँथे राम दाई । साक्षी थिए इटहरीका अग्रज कलाकार बाबुराम प्रधान । तर, कामलाई कुरैमा सिमित राखेर अल्पिए उनी सपनाजति मेरो आँखामा छोडीदिएर । राम धामीले आफ्नो जीवनकालमा गरेका पचासौं सांगीतिक कर्महरु सबै आ–आफ्नो ठाउँमा अब्बल छन् । तर, आफूसँग जोडिएको हुनाले यो गीतको थोरै चर्चा गर्न पुगें । यहाँ म केही स्वार्थी देखिएछु भने माफी ।
राम धामीसँग धनकुटामा पहिलो पटक भेट्दा उनको नाम रामकुमार राजधामी थियो । पछि राम धामी नाम सर्वाधिक प्रचलित र लोकप्रिय बन्यो । म त्यतिबेला धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै रेडियो नेपाल क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रमा कार्यक्रम तथा नाटक शाखाको करार कारिन्दा थिएँ । पूर्वाञ्चलमा बोलिने विभिन्न भाषाभाषीका गीत तथा कार्यक्रम उत्पादन अनि प्रसारण हुन्थे । थारु भाषाका गीत रेकर्ड गर्न राम धामी इटहरीदेखि आफ्नो समूहका साथ धनकुटा रेडियोमा धाइरहन्थे । त्यैबेला रेकर्ड र प्रसारण भएको एउटा थारु भाषाको गीत अझैसम्म कण्ठस्थ छ मलाई – “बुल्कीवाली हो,.... बुल्कीवाली हो !” यो गीत रामकुमार राजधामी कै नामले बज्दछ रेडियोमा अद्यापि । समयको लामो अन्तरालमा हामी पुनः भेटियौं इटहरीमा । यो गीत मैले गुनगुनाएर त्यो समयको रामकाहानी सम्झाउँदा राम दाई भावुक र रोमाञ्चित एकैसाथ भएथे ।
म भोजपुरबाट इटहरीमै बसाईं सरेर आएको कुराले त झन् बेहद खुसी भए । मेरो घरदेश बसाइ अवधिभर अधिकतम समय हाम्रो भेटघाट भइरहन्थ्यो । छुट्टी सकेर परदेश फर्किन ेबेलामा मलाई विराटनगर एयरपोर्टसम्म पुर्याउन आउनेमा दुईजना मुख्य छन् – अभिषेक तिम्सिना र राम धामी । यी दुई नाम मेरा लागि असाध्यै निकट छन् इटहरीमा । सुख दुःखका सबैभन्दा सजिला । अभिषेकले नभ्याएका बेला राम दाई नै निर्विकल्प उपस्थित हुन्थे । राम धामी सार्है रमाइलो मान्छे, समयानुकूल रामरौस गर्न पनि पछि नपर्ने । रेडियो नेपालको वार्षिकोत्सव मान्न २०७२ को चैतमा हामी धनकुटा गयौं । मेरो शब्द, राम दाईको सङ्गीत र उनकै शिष्य उज्वल काफ्लेको स्वरमा आधुनिक गीत प्रतियोगिताको आफ्नो कोटा धानियो । तर, उज्वलले स्टेजमा गीतको एक लाइन नै खाइदियो । राम दाई राँकिए । म पनि रनथनिएँ ।
गीत धनकुटामा छनौट भएर काठमाडाँै जाने आश मर्यो । हामीले अमिलो मन पार्यौं । छेउमा बसेका धनकुटेली पत्रकार तथा गीतकार रमेशचन्द्र अधिकारी पनि चुकचुकाए । काठमाडौँबाट आएका नवराज लम्साल र भुपेन्द्र रायमाझीले नि मन खत गरे । हामी त्यो रात रेडियोले उपलब्ध गराएको होटेल अन्जुलीमा कम्प्लिमेन्ट्री गेस्ट भयौँ । तर आधा रातमा उठेर बजार परिक्रमा गर्दै टुँडिखेलमा पुगेर हाम्रो युगल सांगीतिक सभा गर्यौँ । दुई दशक अघिको जागेश्वर पान पसल नभेटेपछि अरुले नै काम चलायौँ । एउटा रोमान्चक फ्ल्यासब्याक सम्झेर बहुत रमायौँ ।
भोलिपल्ट बिहान ओछ्यानमै फोन आयो रमेशचन्द्र अधिकारीको । हामी इटहरी रवाना हुने योजनामा थियौं । तर रमेशजीको आतिथ्यमा हाम्रो योजना फेल खायो । हाम्रो मोटरसाइकल हिजैदेखि रेडियो नेपालको पार्किङ् लटमा राखेर होटेल झरेका थियौ गाडीमा सामूहिक । अब देब्रेबाससम्म हिँडेर जानु थियो हामीलाई । कार्यक्रम मैले बनाएँ– बीच बजारमा अवस्थित निशान भगवतिको दर्शन गर्ने अनि उकालो लाग्ने पैदल । कलेज पढ्दाताका नित्य दर्शन गर्न आउँथें निशान भगवतिको । धनकुटासँग मेरो भावनात्मक सम्बन्ध छ । त्यहाँको ढुंगा–माटोले मलाई चिन्छजस्तो लाग्छ । त्यही पनि आफू त पहाडमै जन्मी हुर्की गरेको मान्छे, उकालो ओरालो गर्नु सामान्य । राम दाईलाई देब्रेबास पुर्याउन हम्मे पर्यो । उकालोमा उनको कन्तबिजोगै हुँदो रहेछ । उनि त जन्मजातै तराईको मान्छे । त्यसमा पनि धनकुटा बसपार्कदेखि देब्रेबाससम्मको उकालो हिंड्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ ।
मैले त आफ्ना पुराना दिन सम्झेर नोस्टाल्जिक बनँे । तर राम धामीको टप्ुपीबाट धूवाँ उठ्यो । सत्र ठाउँ बसाउँदै र पर्खिंदै देब्रेबास पुर्याएँ । मलाई गाली पनि गरे, रिसाए पनि । अबदेखि यस्तो कष्ट नदिनू भनेर चेतावनी दिए । त्यसो त भोलि रामधुनीमा कार्यक्रम छ, आज बेलैमा फर्किनुपर्छ भनेर आफ्नो अनिच्छा व्यक्त गर्दै थिए । रमेशजीको अनुरोधमा मेरो स्वीकारोक्ति मिसिएपछि राम दाईले चुपचाप साथ दिएका थिए । पुराना सुपरिचित रेडियोकर्मी नयराज नेपाल र रमेशजीको प्रेमिल मुस्कानले स्वागत गरेपछि हाम्रो थकान सल्लेरीको हावासँगै सुस्ताएर फुरुङ्ग उडेको थियो । काठको फलैंचामा बेपर्वाह भुँडी पल्टाएर थ्याच्च बसे राम दाई । उनको मोटोपन पनि उकालो यात्राको दुश्मन बन्यो सायद । एक गिलास चिसो पानी स्वाट्ट पारेपछि मात्रै उनको सातो फर्कियो । अघिल्लो दिनभन्दा प्रितिकर बन्यो त्यो दिन । रमेशजी हामी दुवैका लागि पुराना मित्र हुन् । खातिर गरे । बिहानदेखि बेलुकीसम्मै धनकुटा राखे हामीलाई । एलडि़यो अफिसको चियापान, रेडियो नेपालको ब्रेकफास्ट, रमेशजीको घरको शाकाहारी मिष्ठान्न भोजन अनि पत्रकार महासंघ धनकुटाको स्वागत÷बिदाइ कार्यक्रम । दिनैभरि व्यस्त ।
राम दाईले गीत सुनाए । मैले कविता । घाम रातो हुन थालेपछि हामी ओरालो लाग्यौं । बसौं भन्दै थिए रमेशजी । मेरो भित्री मनले त भन्दै थियो– बसौं आज पनि । रामधुनीको कार्यक्रम भोलि भ्याउनुछ भने राम दाईले र मोटरसाइकल स्टार्ट गरे । एकएक छाति धनकुटाको सम्झना र साथीभाइको माया बोकेर हात हल्लाउंदै हुइँकियौँ हामी । बाख्रे खोलामा पुगेपछि झमक्कै भयो । गीत गाउँदै अगाडि बढ्यौं । राम दाईले भने– “ म त मरेपछि पनि गीतै गाउँछु होला । ” तमोर नदीको तटमा रिभरसाइड रिसोर्ट छ । दिउँसो बिहीबारे हटियामा यसका सञ्चालक÷पत्रकार मोहन बान्तवा भेटिएका थिए । काम विषेशले धनकुटा गएका । फर्किंदा पस्ने दोहोरो वाचा थियो । राम दाई आनाकानी गर्दै थिए । मेरो जिद्दीले जितेपछि पस्यौँ त्यहाँ । मोहनजीको मेहनत र पौरख देखेर मख्ख पर्यौँ हामी ।
सेसेल्समा हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीको जागिरे भएकोले आफ्नो अनुभव र आइडिया बाँड्न पनि भ्याएँ मैले । नदी किनारको एउटा गाजेबोमा एकएक कप दुध चिया हतारले सुर्क्याएपछि छुट्टिने कुरा भयो । आठ बजिसकेको थियो त्यहीँ । क्यान्डल लाइटको मधुर रोशनीले म फ्रिगेट आइल्याण्ड,सेसेल्सको गेस्ट डिनर सर्भिस सम्झिँदै थिएँ । यो राति के जानु, धेरै कुरा गर्नुछ, आज यतै बसौँ – मोहनजीको आग्रहमा मेरो भित्री सहमति थियो । बरु राम दाईले उही रामधुनी कार्यक्रमको हतियार प्रयोग गरे र बहाना बनाए । झ्याउँकिरीको सङ्गीतमाथि लय मिलाउँदै त्यो खोँचको अन्धकारलाई मोटरसाइकलको हेडलाइटले चिरेर उकालो ठाडीयौँ हामी भेडेटारतर्फ ।
जहिल्यै भेडेटार पुगेपछि कि दार्जीलिङको टाइगर हिल सम्झिन्छु, कि मलेसियाको गेन्तिङ्ग हाइल्याण्ड कि त सेसेल्सको लाडिग आइल्याण्ड सम्झिन्छु म । इटहरीका कलाकार रोजन राईको मनशान्त होटेलतिर आँखा घुमाएँ । झलमल्ल बत्ति बलिरहेको थियो । हिजो बिहान त्यहाँ पसिवरी चिया पिउँदै टेबलको तबला बजाएर राम दाईले गीत गाएका थिए । मैले आफ्ना दुई किताब रोजनजीलाई उपहार दिएको थिएँ । फर्किंदा निस्किनु है, भनेका थिए रोजनजीले । समयाभावका कारण त्यसो गरिएन । आउँदाखेरि धनकुटाको हरित सागसब्जी ल्याउनू भन्ने घरको इच्छा थियो । भेडेटारमा रायोको साग,निगुरो र तितेकरेला पोलेथिन झोलामा पोको पारेर धरानको झिलिमिलीमा आँखा ओछ्च्याउँदै ओरालियौं । भेडेटार र धरानबीचको नागबेली सडक बयान गरीसाध्य छैन । एक्कासी राम दाई झस्किए । मोटरसाइकल घच्याक्क भयो । अघिसम्म पहाडको सिरेटोले सकेको कान तातिए । तराई आउँदै गरेकोले त्यो स्वाभाविक भए पनि थप तातिनुमा हामी सवार मोटरसाइकल बिग्रिनु बढी कारण थियो । एक्सिलेरेटरले काम गर्दैन, स्टार्टिङ् मोटर चल्दैन । धन्न ब्रेकचाहीँ ं लाग्दै थियो । साइड लगाएर पेट्रोल चेक गरेको आधा ट्यांकी नै छ ।
हिजै त तरहरामा फुल ट्यांक हालेर गएथ्यौँ । के बिग्रियो पत्तो भएन । मेकानिकल कुरा हाम्लाई के थाहा ? अस्वस्थ मोटरसाइकललाई सुमसुम्याउँदै एकछिन रुन्चे हाँसो गरियो । राम दाईले एक जोर गीत गाए । मैले एक थान गजल गुनगुनाएँ । बेलुकाको आठ बज्न लागिसकेको थियो । जसरी पनि धरान पुग्नुको विकल्प थिएन । धन्न हेड लाइटले चाहीँ आफ्नो धर्म धान्दै थियो । न्युट्रलमा गुडाइयो मोटरसाइकल ओरालै ओरालो । पछाडि बसेर राम दाइको कम्मर च्याप्पै समातेकोछु । राम दाई भन्छन्– नडराउनू, ब्रेकले राम्रै काम गरेकोछ, म होसले चलाउँदैछु । फुस्रेबाट ओरालो लागेपछि झन् मुटु चिउँचिउँ भयो । गाडीहरु बाक्लै देखिन थाले । ठोक्किएला कि भनेर । ओरालो सकिएर समथल भेटेपछि मोटरसाइकल फेरि घ्यार्र गर्यो । अचम्म मोटरसाइकल त पूर्ववत चल्न पो थाल्यो । आज धरानकै बास हुनेभो भन्ने निधोमा पुगिसकेका थियौं । गाडीले गुन लायो इटहरी नै पुगियो रात साँझ गरेर । तीनकुनेको जङ्गलमा डर–डर लाग्यो । तर, राम दाईको गीतैबाट डर भाग्यो । सङ्गीत साधनाको बारेमा धेरै कुरा गरे । उनको मजाकी कथन याद आयो– हो, यीनले त स्वर्गमा पनि सङ्गीत स्कुल नै खोल्छन् होला ।
छुट्टी सकेर कर्मथलो फर्किने मिति नजिकिँदै थियो । जेनेरल चेकअपको लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, धरान जानु थियो मलाई । त्यही दिन वेदराज पौडेलको गजल रेकर्ड गर्न बाल गायक आयुष बिष्टलाई लिएर राम धामी पनि हेम सुब्बाको भावना रेकर्डिङ स्टुडियो धरान जाने रहेछन् । सङ्गीत साधनाको कामले दिनभरि इटहरीमै अलमलिनु परेकाले राम दाई र आयुषका बाबुछोरा ढिलो गरेर धरान पुगे । हस्पिटलको समय भेट्नुपर्ने भएकोले म चाहीँ बिहानै गएँ । बीचबीचमा हाम्रो फोन सम्वाद भइरहन्थ्यो । मेरो काम सकेर भावना स्टुडियोमा भेट्ने सल्लाह मुताविक पाँच बजे साँझ म त्यहाँ पुग्दा केही अत्तोपत्तो रहेनछ ।
लोडसेडिङले होइन, अन्य प्राविधिक कारणले बिजुली बेलुका ६ बजेमात्र आउने रहेछ । कालो चिया पिउँदै पर्खिनुको विकल्प थिएन । भिडियो एक्स–रे गर्नुपर्ने भएकोले म बिहानैदेखि खाली पेट थिएँ । सङ्गीत साधनाको कामको चटारोले राम दाई पनि भोकै रहेछन् । राम दाईसँग भेटेरै केही खाउँला भन्ने थियो । स्टुडियोमा छिरेपछि उतै अलमल भई गयो । बिचरा राम दाईसँग त्यो दिन पैसा रहेनछ । गोजीमा पाँच हजार बोकेर घरबाट निस्केका रहेछन्, सङ्गीत साधना आइपुग्दा कसैलाई अर्जेन्टली दिनुपरेछ ।
ग्यास्ट्रिकले दुख दियो भन्दै ढ्याउढ्याउ गर्दै थिए । हालत त मेरो पनि पत्ला नै थियो । कतिबेला स्टुडियोबाट निस्केर केही खाउँजस्तो भइरहेको थियो । गीत रेकर्डिङ सक्दा आठ बजिसकेको थियो । आयुषका बाउछोरा उनीहरुकै मोटरसाइकल चढेर हामीबाट छुट्टिए । हामीचाहीँ केही खाएर जाउँ भन्दै खानेकुराको दोकान खोज्न थाल्यौं । मोटरसाइकललाई सुस्तरी हिँडाउँदै एकएक साइडबाट त्यस्तो खाद्य–पेय दोकान हेर्दै जाँदा बरगाछि पुगिसकिएछ । तर भनेजस्तो दोकान नदेखिएपछि अब तरहरामा खाउँला भनेर गाडीको गति द्रुत पारे राम दाईले । त्यो दिन धेरै कुरा बिर्सेका रहेछन् उनले । भात खान, मोटरसाइकलमा तेल हाल्न अनि लाइसेन्स बोक्न । तीनकुनेमा ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनहरुको लाइन लगाएर लाइसेन्स प्लस मापसे चेक गर्दै रहेछ । ’आज बर्बादै होलाजस्तो छ यार...!’
राम दाई पछिल्लो हारमा मोटरसाइकल रोकेर बरबराउँदै थिए । पछाडि उनको कम्मरबाट हात झिकेर मौन व्रतमा थिएँ म । मोटरसाइकलको हिउँदे सिरेटो र अघिसम्म आक्रामक बनेको भोक गायब एकाएक । कसरी उम्किने होला भन्ने मात्रै ध्याउन्न थियो हाम्रो । ट्राफिकले पनि प्रत्येकलाई कहाँ चेक गर्दो रहेछ र ! रेन्डम चेक पो गर्दो रहेछ । हामीदेखि अघिका दुई चार जनालाई चेक गरिसकेपछि हामीलगायत अरु दुई चार जनालाई ह्वारह्वार्ति छोडिदियो । अलिक परतिर पुगेपछि लामो सास तान्यौं दुवैले । राम दाईले भने– “यी पुलिसहरुले पनि अनुहार हेरेर व्यवहार गर्छन् । शंकास्पद अनुहार परेकालाई कहाँ छोड्छन् ! हाम्रो त दुवै जनाको अनुहार भलाद्मी परेकाले चेक नगरेका हुन् ।”
राम दाईको कुरा सहि लाग्यो । मैले पनि महसुस गरेको छु धेरैपटक । चारकोसे झाडीको मध्य जङ्गलमा मोटरसाइकलले पनि आफ्नो भोक देखायो । ग्यास्ट्रिक भएछ त्यसलाई पनि । चाकबाट घ्यारघ्यार धुँवा छोड्न थाल्यो तर अगाडि बढ्न सकेन । बाइकलाई साइड लगाएर सिटमुनि फ्युल ट्यांकको बिर्को खोलेर हेरे राम दाईले । लगभग रित्तो ट्यांक । अब झन् फसाद थियो, कसरी पुग्ने घर ? लिफ्ट माग्न मिल्ने खालका कुनै सवारीसाधन पनि आइरहेका थिएनन् । सडक किनारमा लहरै उभिएर नेपालीको सल्लाह मिलायौं । एक सर्को रुन्चे हाँसो उरालेर त्यो निर्जन जङ्गलको अन्धकारलाई चिर्ने कोशिस गर्यौं । यताउति हेर्दा एउटा कुरा सम्झायो त्यो ठाउँले ।
२०७४ सालको जेठ÷असारतिर गीतकार कुसुम गजमेरको स्मृति सभामा सहभागी हुन धरान जाँदै थियौं राम धामी र म नै । त्यही ठाउँमा पुगेपछि आरीले घोप्ट्याएजस्तो मुसलधारे पानी ओइरियो । धरान जानुभन्दा तरहरा जानु नजिक र निको ठानेर फनक्क बाइक घुमाई त्यहींबाट फर्केका थियौं । अनि तरहरामा तात्तातो सुपले बाहिरी–भित्री शरीर तताइसक्दा पानी रहेथ्यो र इटहरी फर्केथ्यौं । बाइक त्यही हो । त्यो दिन गुन लाएथ्यो । आज बेइमान गर्दैछ । त्यसो त गल्ति बाइक धनिको थियो । इन्धन नखाई कसरी गुडोस् ! “आज मलाई दसा लागेको रहेछ,मेरो बुद्धिमा किरा परेको रहेछ,बिर्सिन पनि कति थोक बिर्सिनु त हौ गाँठे...!“– राम दाई फताफताउँदै थिए । मेरोचाहीँ डरले ढक्क मुटु फुल्दै थियो ।
त्यो अनकन्टार जङ्गल अनि अँधेरी रात । राम दाईले जंगलै थर्किनेगरी गीत गाए । मैले पनि उनलाई ठूलठूलो स्वरमा सघाएँ । एकछिन भए पनि डर भाग्यो । कुनै ट्रक,ट्याक्टर आइहाल्छ कि भन्ने आशामा थियौं । तर केहीको अत्तोपत्तो थिएन । राम दाईले जुक्ति लाए । मोटरसाइकललाई बेस्सरी हल्लाए, चोक ताने र तीन पटक ढोगेर स्टार्ट गरे । चमत्कारै भयो । मोटरसाइकल चल्यो । भगवान दाहिना भए । रहलपहल पेट्रोलले तरहरा पुर्यायो । सुरुमा बाइकलाई खुवायौं । अनि हामीले पनि सक्दो खाएर इटहरी पुग्यौं । मलाई घर छोडिदिएर राम दाई आफ्नो घर हवाई चोक गए । २०७६ मङ्सिरको पहिलो साता थियो त्यो । काम, भ्रमण र मनोरञ्जनको सिलसिलामा थुप्रै पटक राम धामीको त्यही मोटरसाइकलमाथि सवार भएर अविस्मरणीय सहयात्रा गरियो । तर, त्यही रोचक यात्रा हाम्रा लागि अन्तिम हुनेछ भन्ने न उनलाई थाहा थियो न मलाई ज्ञात थियो । भयो त्यस्तै,– राम दाई असमयमै यो धराधामबाट अल्पिए । म उनको असामयिक स्मृति धून लेख्न बेराजीमै अभिशप्त छु ।
“बन्दी भएको होइन रहरले
बाध्य बनायो कोरोना कहरले ।”
योचाहीँ उनको र मेरो आखिरी सिर्जनात्मक सह–यात्रा रह्यो । विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको महामारी कोरोना भाइरसको कारण संसार लकडाउनको कहर भोग्दैथ्यो । त्यही कहरले एउटा गजल गुजार्यो मनमा । फेशबुकमा पोस्ट्याएँ । राम दाइले टपक्क टिपेर संगीत गरिसकेछन् । मेसेन्जरमा अडियो क्लिप पठाए । संगीत साधनाको प्रेक्षालयमा पलेटी मारेर बसे, हार्मोनियम बजाउँदै मोबाइलमा कोरोना गजलको सेल्फी भिडियो खिचे र युट्युबमा प्रसारण गरे । नेपालमा लकडाउन खुलेपछि एकदिन राम दाई भिडियो कलमा आए । संगीत साधना अगाडिको मदिरालयबाट क्रिस्टल क्लिन ग्लास उठाएर मलाई देखाउँदै भने– ’म त कोरोनाको दबाई खाँदैछु !’ छेउमा बसेर कम्पनी दिंदै गरेको साथीले सुन्लाकी झैं गरेर सुस्त बोले फेरि– ’पियुर कोदोको हो ।’ खित्का छोडेर फेरि आफ्नै अर्गानिक हाँसो यता पठाएर गिलास मुखतिर लगाए ।
’धनि या गरिब समान सबैलाई
सचेत नभए छोड्दैन जहरले...!’
गजलको अन्तिम शेर यस्तो थियो । दाई सचेत हुनु है, भनें । जवाफमा– ’अब पेलियो यो नाथु कोरोना–सोरोना’ भनेर गीत– संगीतका कुरामा मन मोडे । हाम्रो गीतको भिडियो गर्ने कुरामा पनि महत्वपूर्ण छलफल भयो । राम दाई र कोरोनाको घमासान युद्ध भयो । तर एकफेर महामारीलाई पछारेर पनि अन्ततः हारे । यसैमा दर्दभरी दुखः लागेको छ । राम धामी संगीत जगतको अजीव प्राणी हो, जसले संगीत शास्त्रमा आफ्नो सैद्धान्तिक अडान कायम राख्न कसैसँग केही सम्झौता गरेन । पुषको पहिलो साता मेलिना राईको आवाजमा रेकर्ड भएको मेरो एउटा गीत केही अग्रज संगीतकर्मी र शुभचिन्तकहरुलाई फेशबुक मेसेन्जरमा अडियो क्लिप पठाउने क्रममा राम धामीलाई पनि पठाएँ र प्रतिक्रिया मागें । उताबाट तीनवटा रिएक्ट आए; थम्स अप ! गीत सुनँे !! राम्रो छ !!! यो थियो पुष ७ गते बिहान । त्यो नै अन्तिम भर्च्युअल सम्वाद बन्यो । कोरोनाबाट निको भएर पनि निमोनियाको कारण बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट राम धामी फर्केर घर आउन सकेनन् भन्ने समाचार सनसनी फैलियो सामाजिक संजालभरि ।
२०७७ पुष २६ गते, आइतबार साँझ ।
हिजोसम्म राम धामीको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने शुभचिन्तक मनहरु धमाधम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका थिए । मृत्यु सँस्कारको औपचारिकतामा अश्रुधारा बगाइरहेका थिए । अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि संगीत साधनामा शव राखिने सूचना सञ्जालमा आइरहेकाथिए । राम धामीलाई खाग पारेर इटहरी मुक्तिघाटबाट ब्रम्हनालमा उडिरहेको धुँवा आफैं रोइरहेको थियो । मलाई लाग्यो– मान्छेले आफ्नो मृत्युमा अधिकतम मान्छे रुवाउन र भीडमभीड मलामी जुटाउन सक्नु नै असल जीवनको सार्थकता रहेछ । सार्थक जीवनको क्षतिमा सिङ्गै लोक रुँदोरैछ । राम धामीको मृत्युले सायद थुप्रैलाई असल मान्छे हुन सिकायो । राम धामी साँच्चिकै असल मान्छे हुन्, आँखामा राख्दा पनि नबिझाउने । ’महामानव बीपी कोइरालाले जेलबाट लेखेका पत्रहरुमा आफ्ना साथी,शुभचिन्तक र परिवारजनलाई,– ’ठुलो होइन, असल मान्छे हुनू !’ भनेर लेख्ने गरेको उपदेशात्मक दृष्टान्त एउटा असल मान्छेले मृत्युपर्यन्त पाउने जनसम्मानमा चरितार्थ झल्किँदो रहेछ । ’संसारमा सबैको मृत्यु हुन्छ, यसबाट कोही पनि उम्कन सक्दैन ।’ – मृत्युका सम्बन्धमा बुद्ध वाणी छ ।
यही विकल्परहित साश्वत सत्य हो र चित्त बुझाउने मेलो पनि । त्यसैले त कोरोनाजस्तो भयावह महामारीलाई शानदार जितेर पनि मृत्युसँग नमिठोगरी हारे राम धामी ।
राम धामीले बाचुञ्जेल संगीतभन्दा अधिक अरु केही सोचेनन् । संगीतकै माध्यमबाट थुप्रै संगतहरु सुमधुर साँचे । अब उनलाई बचाउने पनि यही हो । मरेर पनि बाँच्ने मान्छे सायद यस्तै हुन्छन् । उनीसँगका मेरा व्यक्तिगत सबै सन्दर्भ र प्रसंगहरुलाई यो छोटो लेखनीमा उन्न असमर्थ छु । केही छुटाउनै मन नलाग्ने चाहीँ गासें । उनीसँग बिताएका हरेक दिनको एउटा गतिलो अध्याय बन्छ । पुरै सङ्गत समेट्न थाले एउटा खाइलाग्दो ग्रन्थ नै ।
राम धामी कहिल्यै हल्लाखल्लाको चोक र गल्लीमा भेटिएनन् । कहाँ छौ भनेर जतिबेला सोधे पनि यौटै रेडिमेड जवाफ आउँथ्यो– ’म संगीत साधनामा छु, भेट्ने भए यतै आउनू !’ बरु त्यसपछिको यात्रा त्यहीँबाट तय हुन्थ्यो । वरीपरी झुम्मिएका विद्यार्थीसँग बिदा मागेर निस्किन्थे उनी । तिनै प्रिय संगीत गुरु अबदेखि हार्मोनियम फिट्दै हात समातेर संगीतको सूर सिकाउन आउने छैनन् भनेको सुन्दा ति शिष्यका मुटु कति रेक्टर स्केलमा धड्के होलान् कल्पना गर्न गाह्रो छ । एउटा शहरको रैथाने मान्छे, चाहेको भए कमसेकम एउटा चोक उसको हुन्थ्यो । आफ्ना पिता हवाई धामीका नामले हवाई चोक रहँदा अरु थप दुई चोक आफ्नो नामले विस्तार गर्न सक्थे होलान् चिताएको भए ।
तर उनले त्यसो गरेनन् । इटहरीका भूमिपुत्र रामलाई निःस्वार्थ संगीत समर्पणले अन्य कुनै लोभलालचतिर लाग्नै दिएन । बाउबाजेको त्यत्रो चारचौरास सम्पति गीत–संगीतको अध्ययन, अनुसन्धान, साधना र उन्नयनकै निम्ति सिध्याए । संगीत साधना प्रतिष्ठानको धुरी राम धामी ढल्दा त्यो भवन त हल्लियो नै तर उनैले बसाएको जग बलियो भएकोले उनका सहकर्मी र शुभचिन्तकले छानो बनेर त्यसको गारो ओताउने नै छन् । मृत्युपश्चात् पनि राम धामी जिवितै छन् जस्तो लाग्छ । सिर्जनात्मक कर्मले त उनी अमर छन् नै, भौतिक रुपमा पनि उनको देहावसान अपत्यारिलो लाग्छ । अझ यो भर्च्युअल दुनियाँले मान्छेलाई कन्फ्युज बनाइराख्दो रहेछ ।
मान्छे डढेर खरानी भैसक्यो, तर फेशबुकमा अनलाइन नै देख्दा मन झसङ्ग हुने ! मेसेन्जरमा झलल हरियो बत्ती बलेको देख्दा राम दाई अनलाइन नै छन्, जिउँदो मान्छेलाई मर्यो भनेर गरिएका हल्लाहरु झुटा हुन् झैं लागेर केही पटक मेसेज लेखें । कल पनि गरें । तर मरेकाटे रेस्पोन्स भएन । कल उठेन । त्यसो त पहिला पनि घरमा भएका बेला हत्तपत्त उनको फोन उठ्दैनथ्यो । भन्थे– प्रायः नाति केटाले फोन चलाइबस्छ । सायद राम दाईको मोबाइल फोनका सबै एप्सहरु अनलाइन नै छोडेर परमधाम भए ।
उनको नाति केटाले फोन चलाइरहेको छ । फेसबुक लगअन छ र मलाई झुक्याइरहन्छ । सपनामा पनि देखिरहन्छु । विपनामा हामी उनको मोटरसाइकलमा खुब हिँडेका थियौँ । सपनामा पनि मोटरसाइकल लिएर मलाई भेट्न आइरहन्छन् राम दाई । हाम्रो केमेस्ट्री अचाक्ली मिलेको थियो । सायद जीवनको अन्तिम क्षणमा बेस्सरी सम्झे होला । उनले त एकछिन मात्रै, यता भने आजीवन याद दिलाएर गए । मनभित्र छिरेको मान्छे बिर्सिन निक्कै कठिन हुँदो रहेछ । ’’राजधानीले हाम्लाई चिन्दैन र हाम्रा गीत पनि सुन्दैन !” भनेर बेलाबखत गुनासो गर्थे तर मोफसलमै कर्म गरेर प्राज्ञसमेत भए ।
सायद एउटा कर्मवीरले आफ्नो कर्मको सच्चा फल पाउने जति पाए । कच्चा शरीर ओइलाएर झरे पनि मान्छेका मनमा पक्का घर बनाएर गए । मृत्युलाई जित्ने त यो मर्त्यलोकमा को जन्मेको छ र ? सिङ्गो पृथ्वी नै त्राहीमाम पार्ने अदृश्य शक्तिलाई जितेर पनि मृत्युसँग हार्ने नियतिको शिकार यौटा सांगीतिक योद्धाप्रति फेरि पनि र बारबार सलाम्सहित भावपूर्ण शब्द–श्रद्धा मनले अर्पिरहन्छ । इतिहासको सन्दुसबाट सम्झनाका दस्तावेजहरु झिकेर सामाजिक ञ्ंजालका भित्ताहरुमा जब उनकै सहकर्मी राजु केसी पटकपटक फिँजाएर बह पोख्छन्, लाग्छ– साँच्चै राम धामी मरेकै छैनन् । मरेकै भए नि उता स्वर्गमा पनि संगीतालय नै खोलेर यताजस्तै आनन्दले बसेका होलान् ।